Indlu Yangasese Enombono weGulf.
Impahla iseduze nedolobha laseSanta Elena, cishe imizuzu engama-20 uhamba noma imizuzu emi-5 emotweni (Kunconywa imoto). Futhi The Famous Monteverde Cloud Forest futhi iningi lokuvakasha atholakala 10 ukuze 20 imizuzu kude.
Indlu inekhishi elihlome ngokuphelele, Ilungele imindeni! Inamagumbi okulala ama-2 nombhede we-King size.
Ikhaya liphakathi nendawo enothile eyi-5+ acre, eqinisekisa ubumfihlo obuphelele nokuthula.
Indlu iyindawo engenakulibaleka yokuhlala imibhangqwana nemindeni.
Njengoba kunezindlu ezinhlanu kuphela endaweni (5 Acres) futhi abekho omakhelwane abaseduze nawe abangajabulela ukuthula nokuthula endaweni yehlathi. Igumbi elihlanzekile elinamanzi ashisayo, ithuba elingaba khona lokubona izilwane ngaphandle kwamakamelo kanye nosizo lomnikazi ngeziqondiso nemisebenzi. I-Balcony emboziwe ilungele ukujabulela ikhofi lasekuseni noma ukubuka ukushona kwelanga okumangalisayo kwe-Costa Rican.
Igumbi line-coffeemaker ne-Monteverde coffee kanye nesiqandisi esincane.
Ukupaka eduze kwendlu.Kunendawo eyanele yokupaka izimoto eduze kwezindawo esiqashiwe.
Lapho sifika eNdlu sinikeza zonke izihambeli imephu yaseMonteverde futhi siphawule zonke izinkambo ezihlukene nemisebenzi ehlinzekwa yizinkampani ezihlukahlukene endaweni. Ngale ndlela izihambeli zifunda ngalokho okutholakala kuzo futhi zingasebenzisa ukuthi zingathanda ukuhlala isikhathi esingakanani. Uma kudingeka bangakha amaphakheji "okukhetha futhi axube" emisebenzi eyahlukene ukuze afanele umuntu ngamunye.
Sazise uma unemibuzo mayelana nendlu noma ngezinto okumele uzenze!
I-Casa Sunset Hill itholakala kumamayela angu-2 ukusuka edolobheni emgwaqeni ophuma e-Santa Elena oya eningizimu wehle intaba uya kuthelawayeka omkhulu i-Inter American (# 1).
I-driveway yethu ingumqansa futhi inamatshe. Ungakwazi ukukhuphuka intaba ngaphandle kuka-4 ngo-4 kodwa kuyanconywa.
Okungaphezu kwendlu kuyinto, Sithemba ukukubona lapha !!!
Uma leli khaya lingatholakali ngezinsuku zakho, hlola amanye amakhaya akuso sakhiwo. Ziyamangalisa futhi. "
PD Okunye ukuphawula bathi asinayo i-WIFI, kodwa ngemva kwenyanga ka-March sesivele siyifakile.
4.94 ·284 okushiwo abanye
I-Santa Elena iyindawo eseduze. Inqwaba yezindawo zokudlela ongadlela kuzo. Sazise, sinezincomo ezinhle!
Nansi incazelo yendawo yethu kanye ne-Monteverde ngokujwayelekile:
I-Monteverde iyisifunda kunedolobha, yonke into bese isakazwa. Idolobha lethu libizwa ngokuthi i-Santa Elena enezitolo ezinkulu ezimbili, amabhange, ikhemisi, izitolo eziningi zezikhumbuzo nezindawo zokudlela. Saziwa ngokuthi iMonteverde ngenxa yesiqiwu saseMonteverde Cloud Forest.
Izivakashi zingajabulela izinto ezikhangayo ezihlukahlukene, okuhlanganisa okuningi kwesivakashi esicabangela imvelo ngezinketho zakho kokubili imfundo nohambo. Jabulela uhambo oluqondisiwe losuku noma lwasebusuku lwezinhlelo eziningi ze-trail nesazi semvelo sasendaweni, vakashela i-Butterfly Garden, i-Bat Museum, noma i-Frog Pond, udlule ku-zipline canopy tour, noma ucinge abaculi basendaweni kumagalari abo. I-Monteverde iyindawo ekahle kokubili kubathandi bemvelo nalabo abathanda ukwehlukahlukana kwamasiko okucebile.
Nakuba ngingekho ngaso sonke isikhathi, uMfowethu uhlala endaweni eyodwa.Uhlala ejabule ukwamukela isivakashi futhi akusize ngolwazi lwendawo yaseMonteverde.